Somalis For Jesus: TAARIIKHDII HORE EE KANIISADDA SOOMAALIDA
Ali Abdirahman [Cali Cabdiraxmaan Xirsi] (1975:43-74) ayaa daraasaddiisa muhiimka ah ee “The Arab Factor in Somali History” waxa uu ku bilaabayaa isagoo tilmaamaya caddaymaha uugu horreeyay ee ku saabsan markii xadaaradihii qadiimiga ahaa ee Bariga Dhexe ay xidhiidh la yeeshaan xeebaha Soomaaliya. Waxa ugu horreeya ee qoraal Soomaaliya lagaga tilmaamayaana waxa uu kasoo jeedaa Masar ka hor 2000 BC waana iyadoo lagu tilmaamayo dhulka Udugga oo ah “Punt”. Mar danbena, Soomaaliya waxa lagu xusay buugga qadiimiga ah ee “Periplus of the Erythreaean Sea” (oo taariikhdiisu u noqonayso 50 AD), waxaanu mar kale tilmaamayaa iyadoo badmaaxiyayaal ah Giriig iyo Masaari iyo ganacsato ay xidhiidh la sameeyeen xeebaha Badda Cas iyo Khaliijka Cadan ee Geeska Afrika.
Ali Abdirahman (b. 117) waxa uu soo xiganaya ilo Carabi ah oo dhowra isla markaasna u noqonaya qarniyadii 10aad (al-Mascuudi), 11 aad (al-Biruni) iyo 12 aad (al-Idrisi) oo Seylac ku sheegaya inay ahayd Masiixiyiini ay lahaayeen, sidoo kalena waxa deganaa tiro yar oo ahayd ganacsato Muslimiin ah oo kasoo jeeda Yemen. Muslimiintani waxa ay si nabad gelyo leh uula noolaayeen dadka tirada badan cashuur ama jisiyo siin jireen boqorkii Aksum. Trimingham ayaa waxa uu soo xiganayaa Ibn Hawqal oo arrintan wax ku saabsan qoraya sanadku markuu ahaa 978 AD (1952, p. 51 ). Wakhti danbena, waxa magaalooyin xeebedyada gacanta ku dhigay Carab Yemeni ah. Sanadkii 1415 boqorkii Xabashiga ahaa ee Negus Yakuno Amlak waxa uu dib u qabsaday Seylac. Waxa uu laayay Muslimiin badan isagoo intii hadhayna ku khasbay inay Masiixiyiin noqdaan, sidoo kalena masaajidadii wuxuu u beddelay kaniisado. Si kastaba ha noqotee, muddo yar oo tobanaan sano ah, Masiixiyaddu waxay mar kale ka dabar go’day magaaladan.
Inta ay Masiixiyaddu ka jirtay Khaliijka Cadan ee xeebaha woqooyiga Soomaaliya ma aha mid la garanayo. Waxa jira qoraal ka ahaaday St. Francis Xavier booqashadiisii uu ku tegay jasiiradda Soqotra sadku markuu ahaa 1542 (Freeman-Grenville 1966:135-137). Warqad u noqonaysa 20 September 1542, wuxuu u qoray xaruntii dariiqa Kaniisadda Kaatooligga ee Jesuit-ka ee Rooma isaga oo ka warramaya kulankiisa uu la yeeshay dadka deggan jasiiraddaas. Waxa ay sheegteen in iyaga uu Masiixiyiin ka dhigay St. Thomas [Toomas waxa uu ka mid ahaa 12 xerta Ciise Masiix ahaa (Injiilka sida Matayos u qoray 10:1-4). Waxaanu dhaqan kaniisadeed sheegayaa rasuul Toomas inuu u socdaalay dalka reer Faaris [Persia] dabeetana koonfurta Hindiya, halkaasna waxa uu ka asaasay kaniisad qadiimi ah.
St. Xavier waxa uu tilmaamay in dadka reer Soqotra ay ku faraxsanaayeen inay yihiin Masiixiyiin. Si kastaba ha ahaatee, wakhtigaas isaga ah waxa ay ahaayeen dad aan wax qorin waxna akhriyin, manay haysanin Kitaabka Quduuska ah, laakiinse waxa ay awood u lahaayeen inay waxyaalaha ay maalin kasta ku tukanayaan dusha ka xafidaan. Dadka reer Soqotra waxa ay gebi ahaanba illaaween baabtiiska, laakiinse bisha ay soomaan ee ka horreysa Iidda Sarakiciddu waxa uu la mid ahaa ka Kaniisadda Ortodogis [Orthodox] ka Itoobiyaanka. Woqooyi-bari Soomaaliya, waxa jira qabiil (Carab Maxamed Saalax) oo abtirsiimadooda u celiya Soqotra [iyo Degmadda Qayda ee Gobolka Mahra ee Yemen], laakiin wakhti xaadirkan, kuwooda dega Soqorta iyo iyo kuwa Soomaaliya degaaba waxa weeye Muslimiin.
Waxa jira ugu yaraan ilaa afar qabiil oo Soomaali ah isla markaasna la sheego inay asal ahaan kasoo jeedaan Yuhuud. Meelo badan oo ka mid ah koonfurta Itoobiya, koonfurta Soomaaliya iyo woqooyiga Kenya, waxa laga helaa ceelal gacmaha lagu qoday oo qoto dheer, hadhaa dhismayaal qadiimi ah iyo dhagxaan rasaysan waxaanay Oromada iyo Soomaalida maanta halkaas ku nooli sheegaan in waxyaalahan ay sameeyeen dadka Madanluhu. Schlee (1994: 96, 226-228) ayaa waxa uu hubinayaa warbixinta ku saabsan waxyaalaha ay dadkaasi ka sameeyeen woqooyiga Kenya ee Wajeer.
Waxa uu soo xiganayaa taariikhda afka laga sheego ee Soomaalida meeshaas ku dhaqan oo sheegaya in Madanluhu ay yihiin “reer bani-Israa’iil” iyo in la tirtiray oo lagu daray qabiillada Digil, Reewin [Raxanweyn] iyo Hawiye qarniyadii 16-aad ama 17-aad. Schlee waxa uu soo bandhigayaa caddaynta iyadoo ay suurtaggal tahay inay ku daba taxman qabiilka Soomaalida ah ee Ajuuraan oo hadda ku nool galbeedka Wajeer. Lewis (1969:47) waxa uu isna sidoo kale sheegayaa in Madanluhu ay deganaayeen in badan oo ka mida koonfurta Soomaaliya ka hor markii taariikhdu ahayd 1500. Cassanelli (1982:92-96) ayaa isna waxa uu bixinayaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan qabiilkan aan la garanaynin, waxaanay warbixintaasi ku salaysan tahay ilo asal ah oo k a ahaaday koonfurta Soomaaliya. Waxa uu Madanlaha ka dhigayaa inay yihiin qayb ka mid ah boqortooyadii Ajuuraanka ee ka talinaysay koonfurta Soomaaliya qarnigii 16-aad. Brown (1989:29-36) waxa uu diraasad ku sameeyay taariikhda aan qornayn ee qabiillada Soomaalida iyo Boorana ee woqooyibari Kenya taasoo ku saabsan ceelasha iyo dhagxaanta rasaysan ee la sheegayo inay sameeyeen Madanluhu. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu soo xiganayaa maamule hore oo ka tirsanaa gumaystihii Ingiriiska, Lord Delamere, oo sheegaya in Madanluhu ay ahaayeen Muslimiin.
Maadaama oo asal ahaan Soomalida oo dhami ay Muslimiin ahaayeen 500 sano ee ugu danbaysay, suurtaggal ma tahay in la tilmaamo waxyaabihii ay dhaqan ahaan rumaysnaayeen Islaamka hortiis? Mid ka mida sida lagu ogaan karo ayaa waxa ay tahay in la barbar-dhigo diin dhaqameedka dadyowga ay isugu dhow yihiin ee iyagu aan Muslimiinta noqonin. Schlee (1994) waxa uu diraasad ku sameeyay Rendillaha, Gabbraha iyo Sakuuyaha woqooyiga Kenya. Aragtidiisu waxa ay qiimeynaysaa in saddexdan qabiil ee geel-dhaqatada ahi ay yihiin laamo ama qaybo ka mid ah Soomaalida. Wakhtiyadii ugu horreeyay ee Muslimiinta la noqonayayna waxa iyaga gooni ka dhigay oo Soomaalida kale ka soocay duullimaadkii Oromada ku dhowaad markii taariikhdu ahayd 1540-kii. Maadaama oo Oromada Boorana ay iyaga ka sooceen Soomaalida kale markii ay taariikhdu ahayd 1550 ilaa 1860-kii, saddexdan qabiil ma ayna wada noqonin Muslimiin rasmi ah.
Schlee waxa uu tilmaamayaa in Rendillaha (oo ku hadla luqad af-Soomaaliga u dhow) waxa ay ahaayeen kuwii uugu horreeyay ka soocma qabiillada kale ee Soomaalida. Dhaqanka Rendillaha Islaamnimadu waa ay ku yar tahay marka loo eego Gabbraha iyo Sakuuyaha (oo qabatimay lahjadda Oromada Booranaha). Si kastaba ha ahaatee, Rendilluhu waxa ay magacyo Carabi ah u adeegsadeen kuwo ka mida maalmaha toddobaadka, kuwo ka mida bilahooda iyo ereyo diimi ah sida “alal” iyo “dikir”, Schlee (1994:3) waxa uu arkay iyada oo Rendillaha iyo Gabbruhu ay diin dhaqameedkooda ku caabudaan hal ilaah (Waakh) oo keliya. Marka la eego jadwal taariikhoodkooda iyo qaabka allabarigooda waxa jirta dhinacyo ay isaga eeg yihiin ka dadka Yuhuudda ee Axdigii Hore (Andersen 1983).
Caadooyinkanina waxa ay aqoonyahannada uuga baahan yihiin diraasad dheeraad ah. Schlee (1994:55) waxa uu tilmaamayaa iyada oo Rendillaha, Gabbraha iyo Sakuyuhu (oo ay ku jiraan Garraha Muslimiinta ah ee kor ku xusan) ay maalinta Axadda ah u qadariyaan maalin gaar ah oo la nasiyo geela. Waxa kale oo uu sheegayaa iyada oo caado ahaan Rendilluhu ay dhiigga u isticmaalaan barakaynta xoolaha iyo dadka (1994:65). Schlee (1994:255) waxa uu tilmaamayaa in Gabbruhu ay leeyihiin sheeko la mid ah xukunka Sulaymaan ee ku sugan 1 Boqorradii 3:16-27. Waxa kale oo Schlee uu tilmaamayaa in kuwo ka mida Gabbruhu ay geelooda ku suntaan calaamadda iskutallaabta (1994:193).
Caadooyinka diinta Yuhuudda kuwo ka mid ahi waxa ay ugu horreyntii Soomaaliya kaga yimaaddeen dhinaca woqooyiga (Itoobiya--Falaashaha), kaddibna xagga woqooyi-bari (Yemen). Waxa arrintani ay soo bilaabantay xilliyadii Islaamka hortiis waxaanay sii socotay qarniyada qaarkood. Sheekada Boqorad Gudit, oo ahayd cadawgii ugu weynaa ee boqortooyadii Aksum waxa ay tusinaysaa sida ay diinta Yuhuuddu laga ayaabo inay uugu faaftay oo ugu fogaatay xagga koonfurta Itoobiya. Sida uu sheegayo Sergew (1972) isagoo soo xiganaya qoraal-gacmeed qadiimi ah oo ku qoran luqada Ge’ez-ka, Boqorad Gudit waxa ay ahayd Yuhuudiyad. Boqortooyadeeda Damotna waxa fariisin u ahaa koonfurta galbeed ee Boqortooyadii Aksum. Waxa ay ka dhigantahay iyada oo kasoo jeedday mid ka mida qabiilladdii Agawga ee qaatay diinta Yuhuudda qarniyadii hore.
Taddesse (1972: 40-43) waxa uu bixinayaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan markii Gudit ay baabi’isay Aksum sanadkii 979; si kastaba ha noqotee, waxa uu ‘Damoti’ ku magacaabayaa inay xagga koonfureed ka xigtay gobolka Sidamo, waxaanu Gudit kasoo qaadayaa cawaan oonay ahayn Yuhuud. Balisky (2009: 8-9 ) waxa uu bixinayaa aragti waafi ah oo ku saabsan meelaha suurtaggalka ah ee ay noqon karto Damot; waxaanu asaasi ahaan waafaqsan yahay Sergew isagoo markaasna ku soo gunaanadaya inay u dhoweyd dooxada Webiga Gibe, waana meel hadda ay degaan dadka Guraagada iyo Oromadu.
Braukämper (1973: 34-35) waxa uu soo koobayaa xidhiidhada taariikhiga ah ee u dhexeeya qabiilka Hadiya ee Kushitiga Bariga Dhulka-sare iyo qabiilka Agawga ah Kushitiga Badhtamaha. Hadiya waxa ay waxa ay ku noolaadeen agagaarka Soomaalida (1973: 42-45), waxaanay ku noolaayeen meel hadda ay degaan Oromada Arsigu. Waxa suurtaggal ah in qabiilka Yibraha ee Soomaalida ahi ay yeelan karaan kuwo kasoo jeeda Falaashaha Yuhuudda ah oo kasoo farcamay kuwa dega Agaw ee ka midka ah Hadiya. Waxaanay u badan tahay in arrintani ay ka dhacday agagaarka Harar. Braukämper (1973: 35, 47-48 ) waxa uu tijaabinayaa caddaynta in Hadiya iyo Sidama dhinaca bariga fog ee Harar wakhtiyadii qarnigii 16-aad ee qabsigii Oromada.
Tani waxa ay ka dhigan tahay in Sidaama iyo Hadiya ay arrintani ka dhigtay inay jaar la noqdaan qabiillada Soomaalida. Lewis (1969: 54-55) waxa uu xusayaa sheekada ku saabsan Bucur Bacayr (Maxamed Xaniif) naagtiisii la odhan jiray Xantaale in lagu aasay Harar (kuwo kalena waxay rumaysan yihiin in lagu aasay Jigjiga) iyo in Yibruhu ilaa hadda ay booqdaan xabaasheeda.
Sida diinta Yuhuudda oo kale, Masiixiyaddu waxa ay Soomaaliya kasoo gashay dhinaca dhulka-sare ee Itoobiya xagga woqooyi iyo sidoo kale koofurta Carabta. Ganacsatadii koofurta Hindiya (ka socda Kaniisaddii hore ee Mar Thoma ee gobolka Kerala) ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku lug lahaayeen Soqorta iyo qaybaha ku dhow ee Soomaaliya.
Faafitaanka Masiixiyaddu waxa uu bilaabmay Islaamka hortiis waxaanu sii socday laga yaabaa ilaa dabayaaqadii 1500-kii. Levine (1974: 71 ) waxa uu qoray in Seylac ay ka mid ahayd Boqortooyadii Aksum sanadihii 900-kii, kaddibna waxa ay gacanta u gashay Carabta, dabeetana waxa mar danbe dib loo qabsaday horraatemeeyadii qarnigii 15-aad. Fiditaanka Masiixiyadda ee dhinaca koonfureed ee dadyowga ah Kushitiga Bariga Dhulka-sare (Hadiya, Kambaata, Sidama) iyo Omotiga (Wolayta, Kafa) waxa uu qarnigii 13-aad la bilaabmay adeegitaanka diin-faafiyihii caanka ahaa ee la odhan jiray Takle Haymanot (Balisky 2009: 36-42, 67-79). Dhaq-dhaqaatiaankan xagga koonfureed ee Masiixiyaddu waxa uu sii socday qarniyadii 14-aad iyo 15-aad (Levine 1974: 73; Getachew Haile 1984: 113).
Posted by Somalis For Jesus .SFJ at 4:16 PM
This is good article. Thank you for educating us. I always knew Somalians were not muslims but were converts or been forced to convert to Islam by tribal or Clan leaders. The classic Somalians were like Christians or Jewish. The only time Women cover their hair was when they pray. You never seen women wearing headveils or Burka before 1992. This is new.
Somalia was a better place when it was Judeo-Christian country. Even when you listen their language closely you could hear Hebrew. Many of them say they are mix race and mix between Arab and Africans, yes it could be but how do they know if the Arabs they are mix with were Christians or Jewish?, they don't know this because they never question their faith or history. Many Somalians think if someone is Arab they are muslims which is not true. Not all Muslims are Arabs and not All Arabs are Muslims.
February 03, 2013 12:36 PM